Baarlamaanka oo ogolaaday in Bankiga dhexe nin ajnabi ah maamulo | Wardoon
Home Somali News Baarlamaanka oo ogolaaday in Bankiga dhexe nin ajnabi ah maamulo
Baarlamaanka oo ogolaaday in Bankiga dhexe nin ajnabi ah maamulo
Xildhibaanada golaha shacabka oo maanta dood kulul ka yeeshay xeerka Maamulka Bangiga Dhexe oo wax ka bedel lagu sameeyay, waxaana Xildhibaanada qaarkood si adag dood uga keeneen sharcigan Wasiirada soo meel mariyeen.
Qaar kamid ah Xildhibaanada ayaa ka dooday wax ka badelka lagu sameenayo sharciga xeerka Maamulka Bangiga Dhexe , waxa ayna Xildhibaanada dooda dhiibatay qaarkood taageereen waxka bedelka sharciga halka kuwa kalana kasoo horjeeseen.
Markii dooda Xildhibaanada ka lahaayeen wax ka badelka Xeerka mamaulka Bangiga Dhaxe ee Soomaalia ayaa gudoomiyaha waxa uu faray Xildhibaanada in ay cod u qaadaan xeerkan si uu u dhaqan galo ama u diidaan.
Xeerkan wax ka badelka Bangiga Dhaxe ee Soomaalya waxaa taageeray oo meel mariyay 158-Xildhibaan, waxaana xeerkan kasoo horjeestay oo diiday 17-Xildhibaan , mana jirin Xildhibaano ka aamusay.
Xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya xeerkan wax ka badelka Bangiga Dhaxe ay maanta meel mariyeen ayaa ogolaanaya in Bangiga Dhaxe uu madax ka noqon karo Ruux ajnabi ah .
Meel marinta xeerkan wax ka badelka sharciga Bnagiga Dhaxe ayaa kusoo aadaya xili dowlada Soomaaliya la sheegay in ay dooneyso in Bangiga Dhaxe madax ka noqdo nin ajnabi ah oo kasoo jeeda dalka Briain.
Previous articleHantidhowraha iyo kuxigeenkisa oo isku dhegan
Next articleXildhibaan Sakariye ”Ninka gaal ah Kitaabkee lagu dhaarinayaa?”+VIDEO
AKHRISO:- Xaliimo Yareey oo lagu eedeeyay cunsurinimo
Shan Kursi oo kamid ah doorashada Banaadiriga oo lashaaciyay